अलैँचीबाट उकासिएका लमजुङका कृषक - नेपालबहस
| १२:४४:५६ मा प्रकाशित
Onfdsf] dfOdem’jfdf cn}FrL ;’sfpFb} Ps o’jtL . clxn] oxfF cn}FrL l6Kg] r6f/f]5. tl:a/ M uf]ljGb nfld5fg], Onfd, /f;;
१६ माघ, लमजुङ । मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–७ छिनखोला गाउँबाट बेँसीशहर झरेका अजय तामाङ परिवारका साथ सुख, सयल र सुविधाको जीवन बिताउने सपना देखेर १३ वर्षअघि दुवई हानियो । उनको सपना केवल सपना मात्रै भयो । विदेशमा न सोचेजस्तो काम, न सोचेजस्तो कमाइ । साढे दुई वर्षपछि उनी नेपाल फर्किए । न विदेशको कमाइ, न स्वदेशमा कुनै रोजगारीको उपाय । दुविधा बढ्दै गएपछि उनले झलक्क सम्झिए, छिनखोलाकै पाखो पखेरो ।
उतिबेला गाउँगाउँमा अलैँची खेतीको लहर चलेको थियो । त्यही लहरमा लहरिँदै पसे छिनखोलाको सेपिलो पाखातिर । उनले शुरु गरे अलैँची खेती । उतिबेला काम खोज्दै विदेश भौँतारिएका उनी अहिलेका उम्दा अलैँची कृषक । शुरुमा एक रोपनी जग्गामा अलैँची खेती विस्तार गरे। खेतीमा राम्रो हुन थालेपछि अहिले ४० रोपनी क्षेत्रफलमा अलैँची लगाएको छ । अलैँची दाना बेचेर अघिल्लो वर्ष रु पाँच लाख बढी कमाएको उनले जानकारी दिए । यस वर्ष पनि सोही हाराहारीमा अलैँची दाना बिक्री गर्दै आम्दानी गरे । यस वर्ष उनले ४०० किलो अलैँची उत्पादन गरेको थियो । अलैँची खरिद बिक्री गर्ने बिरुवा बिक्रीबाट गत वर्ष डेढ लाख बिरुवा उत्पादन गर्दै बिक्री गरेको र यस वर्ष २०० बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्य अलैँची कृषक तामाङको छ । उनले आफ्नै बारीमा अलैँची नर्सरी स्थापना गरेर उत्पादनका साथै अलैँची बिरुवा बिक्री गर्दै आएको छ ।
अलैँचीका दाना र बिरुवा बिक्री गरेर वार्षिक रु १२/१३ लाख सजिलै आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनलाई यसरी वार्षिक यतिका रकम आम्दानी हुँदा शुरु शुरुमा त सपनजस्तै हुने गरेको थियो । उनले कहिल्यै यस पेशाबाट आम्दानी गरेको थिएन । अलँैची व्यवसाय सम्हाल्नुभन्दा अघि परिवारको सुनौलो भविष्यको सपना देख्दै आफू विदेश गएको उनले अनुभव सुनाए । “त्यहाँ दुःख गरेपनि वार्षिक रु तीन लाखभन्दा बढी कमाइ हुन सकेन । अहिले परिवारको साथमा घरमा बसीबसी वार्षिक रु १२/१३ लाख र कुनै वर्ष त १५ लाखसम्म कमाइ हुने गरेको छ”, उनले भने, “यतिका आम्दानी हुन्छ भनेर कहिल्यै सोचिको नै थिइन, अलैँची खेतीले मेरो भाग्य नै परिवर्तन गरिदिएको छ ।”
उनी नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष तथा लमजुङ शाखाको अध्यक्ष समेत हुन् । रोजगारी नभएर गाउँ छाड्ने गरेका र विदेशमा रहेका युवालाई गाउँगाउँमा आएर अलैँची खेती गरी विदेशमा भन्दा राम्रो आम्दानी गर्न उनको आग्रह छ । कति युवालाई त उनले विदेश जानबाट रोक्दै अलैँची व्यवसायमा आबद्ध गराएर सफल कृषकसमेत बनाइसकेकाे छ । उनले जिल्लाका युवा तथा कृषकलाई अलैँची खेतीमा आबद्ध गराउँदै सफल कृषक बनाउनमा ठूलो योगदान दिएको छ ।
अजयजस्तै मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–७ लुदीका सोमबहादुर तामाङले पनि अलैँची खेती गरी राम्रो आम्दानी गर्दै आएको छ । उनले पनि अलैँची व्यवसायय शुरु गर्नुअघि १० वर्ष मलेसियामा काम गरे । विदेशको रोजगारीले खासै प्रगति । सुनौलो भविष्य देखेर गएका उनको जीवन सोचेजस्तो हुन सकेन । “कडा परिश्रम गरेकै थिएँ, तर आम्दानी सोचेजस्तो नहुँदा परिवारको खर्च पनि चलाउन मुस्किल भयो”, उनले भने, “घडेरी, सम्पत्ति जोड्ने कुरात परको हुन पुग्या, घरखर्च चलाउन पनि मुस्किल भयो ।” विदेशबाट फर्किएपछि गाउँमा छाडेर गएको बाँझो जग्गामा अलैँची खेती विस्तार गर्न थालेका छन् । विदेशबाट आउने बित्तिकै २३ वर्षअघि शुरुमा एक रोपनी जग्गाबाट अलैँची खेती विस्तार गरेका उनले अहिले ४० रोपनी क्षेक्रफलमा अलैँची खेती गरेको छ ।
विदेशमा कमाइ गर्न नसके पनि नेपालमा नै अलैँची खेतीबाट धेरै राम्रो आम्दानी भइरहेको उनले बताए । वार्षिक रु सात लाखसम्म अलैँची दानाबाट आम्दानी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनले स्थापना गरेको खाचे अलैँची नर्सरी तथा जडीबुटी नर्सरी फार्ममा उत्पादित नर्सरी अलैँचीको बिरुवा बिक्रीबाट वार्षिक रु चार लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको छ । विदेशमा गर्न नसकेको आम्दानी परिवारको साथमा बसेरै राम्रो आम्दानी भएपछि अहिले उनलाई अलैँची व्यवसाय ढिलो शुरु गरेको र विदेश गएकोमा पछुतो छ ।
तामाङद्वय जस्तै अर्का अलैँची कृषक मस्र्याङ्दी –७ छिनखोलाका बलराम लामाले अलैँचीबाट वार्षिक रु ९/१० लाख आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ । अलँैची खेति शुरु गर्नुअघि आफ्ना गाउँठाउँको जग्गा जमीन घरपरिवार र आफन्त छोडेर उनी विदेश पुगे । रोजगारीको सिलसिलामा पाँच वर्षसम्म खाडीमुलुकमा भविष्य नदेखेपछि आफ्नै गाउँमा अलैँची खेती गर्न थालेका लामाले २० रोपनी जग्गामा अलैँची खेती गर्दै आएको छ । यस वर्ष अलैँची बिक्रीबाट करीब रु पाँच लाख आम्दानी गर्न सफल भएको उनले जानकारी दिए । विदेशमा दुई लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न कठिन भएको बताउँदै उहाँले अहिले अलँैचीले त्यहाँको भन्दा दोब्बर बढी आम्दानी भएको र परिवारको गुजारा राम्रैसँग चलेको अनुभव सुनाए । “विदेशमा भन्दा स्वदेशमै गर्नसके भविष्य उज्वल हुँदो रहेछ”, उनले भने ।
अलैँची खेती यस जिल्लामा ३६ वर्षअघिबाट शुरुआत भएको अलैँची महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ । अलैँची खेतीतर्फ युवा आकर्षित भएको र यसले कृषकको जीवन नै परिवर्तन भएको उनले बताए । पछिल्ला वर्षमा शहर पसेका पनि गाउँगाउँ आएर अलैँची खेती गर्न थालेको जनाउँदै उनले परम्परागत खेतीभन्दा अलैँची खेतीबाट धेरै आम्दानी हुने भएकाले यसतर्फ आकर्षण बढेको बताए । जिल्लामा उत्पादित अलैँची दानाको माग उच्च रहँदै आएको छ । यस वर्ष कृषकले तीन हजार ५०० क्विन्टल अलैँची दाना बिक्रीबाट रु १८ करोड २० लाख आम्दानी गरेका छन् ।
तनहुँका कृषकलाई मौरी घार वितरण १ हप्ता पहिले
जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो शीत भण्डारण बनेपछि कृषक उत्साहित २ हप्ता पहिले
कृषक पाठशालामा तरकारी भिन्डीका माला २ हप्ता पहिले
किसानलाई आधुनिक बैंकिङमा लैजाँदै मेगा बैंक ३ हप्ता पहिले
स्वयंसेविकाले जोखिम भत्ता पाएनन् अझै ८ मिनेट पहिले
वीरको नयाँ भवन अक्सिजन अभावले सञ्चालनमा कठिनाइ १७ मिनेट पहिले
नयाँ सरकार कोभिडविरुद्ध सक्रिय हाेला त ? २६ मिनेट पहिले
राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगित ४४ मिनेट पहिले
उच्च शेयरमूल्य भएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको मुनाफा ४९ प्रतिशतले घट्यो २४ घण्टा पहिले
जेठ ७ गतेसम्म बाजुरामा निषेधाज्ञा २ दिन पहिले
बजारमा सुनको मूल्य ताेलामा कति ? ४ दिन पहिले
चितवनका बिभिन्न अस्पतालमा उपचाररत ५ संक्रमितको मृत्यु २ दिन पहिले
निषेधाज्ञामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशियाे १ दिन पहिले
भोजपुरी चलचित्र ‘प्रेमगीत २’ को ट्रेलर सार्वजनिक २ दिन पहिले
हुम्ला भित्रिने मुख्य नाकामा कडाइ, सर्वसाधारण चिन्तित ३ हप्ता पहिले
बल्खुमा शिलान्यास र थापाथलीमा पार्टी कार्यालय संचालन ३ हप्ता पहिले
एनएमबी बैंकको १६.२० प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा ५ महिना पहिले
बूढानीलकण्ठमा कोसेली घर निर्माण गरिदै १ वर्ष पहिले
शंकर पोखरेलको तालुमा फल्यो आलु २ हप्ता पहिले
अर्घाखाँची बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १९ पुग्यो १ वर्ष पहिले